त्यो अन्तिम शुभकामना :: डा सन्देश दाहाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
त्यो अन्तिम शुभकामना
डा सन्देश दाहाल शनिबार, कात्तिक २७, २०७८, ०९:४०:००
दशैंको सप्तमीको दिन, बिहान बिहान हतार छ। नुहाइधुवाइ, चिया अनि अस्पतालको ड्युटी। अरुले फुलपातीको तयारी गर्दै होलान। आज सप्तमी मेरो ड्युटी, भोली र पर्सी ओमको नवमी र दशमी। जे होस दुइ दिन मोज हुनेभयो। त्यसैमा मनमा हर्षको उल्लास छ। नत्र टीकाको दिन टीका लगाउन पनि राम्रो पाइन्न, इमरजेन्सीको फोन बजेको बज्यै।
सोचको बीचमा नै टिनिन्न फोनमा कल आउँछ, यसो हेर्छु नचिनेको नम्बर छ। 'नमस्ते, म डक्टर सन्देश। के थियो होला? नचिनेको नम्बर परेछ।,' मैले भनें।
'डाक्टरसाब, म रविजंग थापा। चिन्नुभयो? मेरो पुरानो नम्बर हरायो। वीर अस्पतालको हजुरको बिरामी क्या त!' उताबाट आवाज आयो।
जीवनमा उपचार गरेका कति बिरामी याद हुन्छ, कति हुँदैन। कोही बिरामी भने स्मृतिमा अमिट भएर बसेका हुन्छन्।
'ओहो रविजंग जी पो” मैले आश्चर्य मान्दै भनें, “अनि अहिले कस्तो छ? फेरि जन्डिस त भएको छैन नि? काम कस्तो चल्दैछ?'
'एकदम ठीक छ डाक्साब, केही समस्या छैन। हजुरलाइ दशैँको शुभकामना टक्राउन फोन गरेको। तपाइँले जे जति गर्नुभयो, म त शुभकामना मात्र त दिन सक्छु। बाँचुन्जेल शुभकामना टक्राउन पाऊँ,' उनको गला अवरुद्द भयो।
'के हुन्छ र तपाईंलाई, रोग फालिहालियो। मैले त जे गर्नुपर्ने थियो त्यही मात्र त गर्‍या हो।'
उनले भने, 'सबै ठीक छ, फेरि जागीरमा फर्किएको छु, कमाइ राम्रै छ। सरलाइ धेरै धन्यबाद। अहिले त ज्यान अलि मोटाएको पनि छ।'
'हवस, तपाईंलाई नि दशैँको धेरै शुभकामना, स्वस्थ रहनुस्' मैले फोन राखेँ।
यो मेरो चाडबाडको नियमित नियति नै बनिसकेको थियो, बिगत ५ बर्षमा। जीवनमा कमाएको गौरव पनि यही नै हो। नियमित यसरी बिनास्वार्थ शुभकामना दिने अरु पनि केही मानिस कमाएको छु आजसम्म। दुइचार फोन बज्छन् चाडबाडको दिन। यो फोनको प्रसंग पोहोरको दशैँको हो।
यसपाली दशैँमा उनको फोन आएन, अरु सबैको फोन आयो। सोचिरहेथेँ, 'बिर्सिए होलान क्यारे अब त। मेरो नयाँ नम्बर भएर हो कि। तर पोहोर साथीबाट नम्बर पत्ता लगाएर पनि फोन गरेका थिए त।' मन केहीबेर टोलायो। फेरि अस्पताल निस्किएँ आफ्नो नियमित काम गर्न।
वीरमा सर्जरीमा एमडी सुरु गरेर भर्खर अपरेसन गर्न सुरु गरिएको थियो। जीवन अति नै ब्यस्त थियो, ओपिडी, वार्ड र अपरेसन। परिवार, निन्द्रा, खाना र चियापानी सबै सुबिधाजस्ता भएका थिए जीवनमा।
सायद शुक्रबारको दिन थियो, इमरजेन्सीमा ड्युटी थियो। बेड नम्बर ११ मा कुक्रुक्क परेर ज्वरोले काम्दै बसेको एउटा बिरामी, दुब्लो र पहेँलो। 'के भएर आउनुभएको?'
राम्ररी बोल्न समेत नसक्ने उनले भने,'३ महिना भयो, जन्डीस भएको थियो, अहिले ज्वरो पनि छ।'
यसो हेरेको, ब्लड प्रेसरनै रेकर्ड भएन, रिपोर्टमा जन्डिस २६ थियो।
'आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्छ त, सेप्सिस भएको छ, कलेजोबाट पाइप हालेर पित्त निकाल्नुपर्छ। कोसँग आउनुभएको छ?' छेउमा श्रीमती बसेकी थिइन, दुबै सुँकसुकाउन थाले।
'खर्च धेरै लाग्ने होला, हामीसँग त केही पनि छैन।'
'छोरा त छ तर छुट्टिएर बसेको छ।'
उहाँ सेक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्थ्यो, चार महिना भयो काम गर्न नसकेको। छोरालाई भनेको, 'मरे हुन्छ तर उपचारमा सहयोग गर्न सक्दिन भन्छ,' श्रीमतीले रुँदै भनिन्।
मैले भन्ने कुरा नै केही रहेन, वीर अस्पताल भए पनि पुरै नि:शुल्क त केही छैन। नेपालको स्वास्थ्य संस्था कुनै पनि पुर्ण नि:शुल्क छैनन्, औषधि त किन्नु परिहाल्छ।
'पेटको भिडियो एक्स रे हेरेपछि कुरा गरौँला,' भनेर म बाहिर निस्किएँ अर्को अपरेसनमा।
अर्को बिरामीको अपरेसन गरिरहँदा मनमा रविजंगको दुब्लो पातलो कमजोर अनुहार नाचिरह्यो। अपरेसन सकाएर पुनः इमरजेन्सी नै पुगेँ। श्रीमती बाहिर गएकी रहिछिन्। मैले भिडियो एक्सरेको रिपोर्ट हेरेँ, पत्थरीले पित्तनलीको बाटो बन्द गरेको कारण यस्तो भएको रहेछ। मैले उनलाई रोगको बारेमा भनेँ, र उपचारको बारेमा सोधेँ, 'के गर्ने त अब?'
उनले केही भन्न सकेनन्, केबल बरर्र आँशु झारे। उनले उपचारको याचना गर्न सकेनन् किनभने उनी असहाय थिए। तर उनको आँशु भनिरहेको थियो 'म बाँच्न चाहन्छु डाक्टर साब।' गरिबीमा मानिसले ज्यानको याचना गर्न समेत नसक्ने रहेछ।
उनकी श्रीमती आइन्, मैले कुरा गरेँ फेरि।
'उपचार लाग्ने रोग हो, अपरेसन गर्ने स्थितिमा बिरामी पुर्याउन सकियो भने फेरि मानिस गरिखाने अवस्थामा पुग्नसक्छ तर रोग छिप्पिएकाले अलि धेरै नै खर्च र मिहिनेत लाग्नसक्छ।'
उनले केहीबेर सोचेर भनिन,'डाक्साब, उपचार नगर्ने जे होला होला घर लिएर जाने।'
'किन उपचार नगरी जाने नि निको हुने रोगमा? क्यान्सर भएको त होइन नि त।'
उनले रुँदै भनिन,'उहाँ बिरामी भएको तीन महिना भयो, घरमा पकाउने भाँडाकुँडा पनि बेचेर खाइसकियो। ऋण लिने पनि ठाउँ छैन।'
उपचार लाग्ने रोग छ, बिरामी मर्न कसरी छाडीदिने?
मैले भनेँ, 'ठिकै छ, आज राती यहीँ उपचार गरौँला, मसँग भएको औषधि दिन्छु, भोलि के गर्न सकिन्छ विचार गरौँला।'
उनले हुन्छ भनिन्।
आफूले आर्थिक सहयोग गर्नसक्ने हैँसियत थिएन। वीरले त २४ घन्टा खट्ने हामीजस्ता रेजिडेन्ट डाक्टरलाई जीवन निर्बाह भत्ता भनेर महिनाको २० हजार रुपैयाँ दिन्थ्यो। साँच्चै भन्नु भने त्यो पैसा त मेरी छोरीको डाइपर किन्दै सकिन्थ्यो।
अर्को दिन आइसियुको जोहो गरियो, पित्तनलीमा पाइप हालियो, फ्रि बेड मिलाइयो, फार्मेसीलाई अनुनय गरेर फ्रिमा औषधि मिलाइयो। तर पनि बिरामी र परिवारसँग खाना खाने समेत पैसा भएन। फेसबुकको आफ्ने पेजमा विज्ञापन राखेर केही सहयोगी हातहरुबाट पैसा जुटाएर उनीहरुलाइ दिइयो।
करीब महिनादिनको अथक प्रयासपछि अपरेसन गर्न बिरामी फिट भए। सामान जुटाइयो, कसो कसो अपरेसन गरियो।
अपरेसन राम्रो भयो। बिरामी राम्रो भए। पन्ध्र दिनमा डिष्चार्ज गरियो, उनी हिँड्दै घर गए। हर्षको आँशु नै झर्यो उनलाइ डिस्चार्ज गरेको दिन। हाम्रो युनिटको किशोर सर, घनश्याम दाइ, साथी ओम र सहकर्मी भाइ जैनेन्द्रको समेत उल्लेख्य सहयोग र मिहिनेत रहेको थियो। ६ हप्तामा उनी काममा जान थाले रे, त्यसपछी सँधै चाडबाडमा शुभकामना दिन फोन गर्नेगरेका थिए।
रविजंगको फोन नआएर मनमा नरमाइलो भइरहको थियो। बिगत पाँच बर्षमा उनको फोन नआएको यो नै पहिलो थियो। फोन गरौँ कि जस्तो लागेको थियो, तर गर्न सकिरहेको थिइन। अकस्मात एउटा घटना याद आयो करिब ६ महिना अगाडिको। मैले वीर छोडेर न्युरो अस्पतालमा सेवा सुरु गरिसकेको थिएँ। राती २ बजे तिर फोनकल आएको थियो। उताबाट महिलाको आवाज थियो।
'डाक्साब, हजुर वीरमै हो आजकल?'
'होइन त, म त न्युरोमा आजकल,' मैले उत्तर दिएँ, 'किन के भयो र?'
'म मेनुका बोलेको, रविजंगकी श्रीमती। उहाँलाइ फेरि जीउ चिलाउने भएको छ, जन्डिस र ज्वरो पनि छ।'
मैले भनेँ, 'पहिले अपरेसन गरेको पित्तनली साँघुरिएको वा पहिलाजस्तै फेरि पत्थरी भएको हुनसक्छ। वीर अस्पतालमा नै देखाउनुस न। म नभएर के भयो त, अस्पताल त त्यहीँ छ नि।'
हस् भनेर उनले फोन राखिन्। त्यसपछी केही सम्पर्क भएन। मध्यरातमा भएको कुराकानी मैले पनि भुलेछु सायद।
झल्याँस्स भयो, ओहो के भयो त त्यसपछी? फोन गर्ने हिम्मत भएन म मा। रविजंगकी श्रीमतीले फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएकी थिइन, मैले पेन्डिंग नै राख्या थिएँ। उनको फेसबुकमा गएर डराइ डराइ पेज हेरेँ। मनै अमिलो भयो।
केही समय अगाडी दुबैसँगै दोलखा भिमसेन गएको फोटो थियो, त्यसभन्दा माथी 'गाइजात्राको अवसरमा रविजंगको नाममा बच्चाहरुलाइ खाना खुवाएको' भनेर स्टाटस र उनको फोटो हालिएको थियो।
उनी इमरजेन्सीमा हुँदा रुँदै आँसुले गरेको जीवनको याचना र उनले सन्चै हुँदा दिएका चाडबाडका शुभकामना मनमा नाचिरहेका थिए। बिरामी बित्दा डाक्टर पेसागत हिसाबमा दुखी होला, किनभने जीवन मरण हाम्रो नियमित भोगाइ नै हो। तर सायद रविजंग मेरा बिरामी मात्र रहेनन् होला, आफन्त बितेको जलन र पीडा भएरहेछ। उनले नियतिसंग हारे, आर्थिक सामाजिक जटीलतासँग हारे वा रोगसँग हारे मलाइ थाहा छैन र अब थाहा पाउने आँटपनि छैन। तर अब उनको यादमा बस त्यही अन्तिम शुभकामनाका शब्दहरु मेरो कानमा गुंजिरहेछन। अस्पतालमा मानिस रोगसँग नभएर नियतिसंग हार्नुपर्ने बाध्यता नभए कति आनन्द हुँदो हो हामीलाइ पनि? हार्दिक श्रद्दासुमन रविजंग।
(पात्रहरुको नाम परिवर्तन गरिएको)